HUBANNOOF! Qeerroon nuti qabnu Qeerroo tokkicha. Sunis Qeerroo Oromooti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHUBANNOOF! Qeerroon nuti qabnu Qeerroo tokkicha. Sunis Qeerroo Oromooti.
HUBANNOOF! Qeerroon nuti qabnu Qeerroo tokkicha. Sunis Qeerroo Oromooti.
HUBANNOOF! nuti qabnu Qeerroo tokkicha. Sunis Qeerroo Oromooti.
Qeerroo hidhannoo tokko malee, ajajaa giddu galaa tokko malee, abdii eenyuutiinuu alatti ofii isaaf golee Oromiyaa mara keessaa wal dhagahee seenaa hojjete sana. Qeerroo diina hanga funyaaniitti hidhateen sodaatamee jabina Oromummaa diinatti agarsiise sana. Qeerroo fakkeenya tokkummaa fi jagunummaa tahee Amaraaf, Sidaamaaf, Somaaleef, Guraageef kkf hundaaf fakkeeenya dargaggummaa tahe sana. Boris jabinni Qeerroo kanaa akka daranuu cimee itti fufu barbaanna. Jabinni kun ammoo tokkummaa keessaa dhalate.
Har’a garuu wanti kutaa Oromiyaa tokko tokko keessatti mul’ataa jiru tokkummaa Qeerroo keenyaaf yaaddoo uumaa jira. Keessattuu odeessi Dhiha Oromiyaa irraa walitti aansee na dhaqqabaa jiru gaarii miti. Dhaabni siyaasaa naannoo sana keessa sosso’u tokko kaleessa Najjo irratti walgahii godhee ture. Walgahii kana irrattis dabballeen dhaaba sanii Qeerroo bakka saditti qoodee lafa kaa’e.
1. Qeerroo Bilisummaa
2. Qeerroo OPDO
3. Qeerroo asii fi achi jettu (kan dhaabbii hin qabne)
Kana keessaa Qeerroo isa lakkoofsa tokkoffaa irratti kaayan fudhatanii joollee hafte hamilee buusan. Kun gonkuaa laalcha hamaa fi abaaramaa dha. Gochaan dantaa dhaaba siyaasaaf jecha Qeerroo qoqqoodan kun booda balaan isaa numa hundatti dhufa. Dantaa dhaabaa caalaa dantaa ummata Oromoo dursina osoo tahee Qeerroo tokkicha kaleessa laalcha siyaasaa kamirrayyuu walaba of godhee diina isaa qofa irratti qabsoo gohaa ture har’a bifa nama gaddisiisuun akkasitti hin qircinu ture. Maaloo dhaabonni gochaa taajjabsiisaa akkasiitti bobbaatan dhaabbadhaa of madaalaa.
Eeessayyuu jiraadhaa. Dhaaba kamuu deeggaraa, mormaays. Akka Qeerrootti garuu waan tokkummaa keessan cabsu calliftanii hin laalinaa. Miseensa dhaba fedhee tahuuf mirga ni qabdu. Garuu dantaa Qeerrummaa keessanii, dantaa ummatummaa keessanii isa kaleessa seenaa ittiin hojjettanii addunyaatti of agarsiiftan, gootummaa tokkummaa keessanii isa kaleessa diina ittiin of sodaachiftanii saba keessan ittiin mataa ol qabdan san abadan dabarsitanii dhaabota siyaasaatti hin gurguratinaa.
Benishaangul Gumuz: ‘Miseensonni Poolisii 10 Benishaangul to’annoo jala oolfaman’
The End of the Abyssinian Empire; The Dangers of Amhara Chauvinism in Today’s Ethiopia